के सिटिइभिटी पढ्ने विद्यार्थी होइनन्? :: गोकुल सुबेदी :: Setopati
म सिभिल ईन्जिनियरिङमा डिप्लोमा तहको पाचौँ सेमेस्टरमा पढ्ने विद्यार्थी हुँ। म पोखरा ईन्जिनियरिङ कलेजमा पढ्दै छु। खासमा म अहिले डिप्लोमा पढाइ सकी विश्वविद्यालयको शिक्षा तथा रोजगारीको लागि तयारी गरिरहेको हुनुपर्ने विद्यार्थी। तर अझै अन्तिम वर्षको पहिलो अंशको परीक्षा हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन।
'प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता' भन्ने नारा गुन्जिरहँदा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयहरु स्थापना भइरहेका छन्। यही तरिकाले विभिन्न प्रकारका प्राविधिक शिक्षा पढाउने सरकारी तथा निजी शिक्षालय ठाउँ-ठाउँमा खुल्दा पक्कै पनि प्राविधिक जनशक्तिको कमी हुने छैन।
तर अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने जति प्राविधिक शिक्षा पढे पनि धेरै विद्यार्थीलाई रोजगार मिल्न नै गाह्रो भइराखेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। प्राविधिक शिक्षाको डिप्लोमा, प्री-डिप्लोमा लेभलको पढाइ र धेरै प्राविधिक तालिमहरु सिटिइभिटीबाट संचालनमा छन्।
प्राविधिक शिक्षा अरु पढाइभन्दा निकै खर्चिलो हुने गर्दछ। आर्थिक स्तर कमी हुनेहरूको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ तर सबै त्यही कोटामा पढ्न पक्कै पाउँदैनन्। अनि ऋण लिएर भए पनि पढिरहेका छन्। यो कुरा सिटिइभिटीले बुझेको छ कि नाई?
अहिलेको कोभिड-१९ ले गर्दा सबैभन्दा बढी चपेटामा विद्यार्थी परेको छन्। झन् त्यसैमाथि सिटिइभिटी विद्यार्थीहरु। तीन वर्षको कोर्स पाँच वर्ष लाग्ने देखियो, पक्कापक्की भइसक्यो। जसरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गरेको छ, त्यसरी सिटिइभिटीले विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्ने काममा निकै ढिलासुस्ती र लापरबाही गरिरहेको छ। अझै पनि कति ढिला हुने हो कुनै आकलन गर्न सकिँदैन।
छिटै पढाइ सकी जागिर खाएर साहुको ऋण तिर्ने सपनालाई सिटिइभिटीले झन् ऋणको भार थपिदिने काम गरेको छ।। विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाटबाट विद्यार्थीलाई सिकाइ लगायत परीक्षा र मूल्यांकन पनि गर्न सकिन्छ। जसरी विभिन्न विश्व विद्यालयहरुले गरिरहेको छन्। कुनै दिन सिटिइभिटी विद्यार्थीको लागि भनेर न कुनै सूचना निकालियो न कुनै समाचार जसरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निकाल्ने गर्छ र गरेको थियो।
अहिले हेर्ने हो भने नयाँ शैक्षिक सत्रका विद्यार्थी भर्ना भइरहेको छन् तर पुराना विद्यार्थीलाई अन्योलमा पारिरहेको छ। अन्तिममा मेरो आग्रह, शैक्षिक माफियाहरुको समूह भनेर हामीले सिटिइभिटी चिन्न बाध्य नबाइदिनु होला।
हरेक प्रश्नको उत्तर कोभिडलाई देखाएर उम्कन नखोज्नु होला। जसरी प्राविधिक शिक्षाको नारा छ नि त्यसरी नै प्राविधिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई हौसला र प्राथमिकता दिनुहोला। सधैँ यसरी अन्योलमा नपारिदिनु होला।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ३१, २०७८, ०४:२९:२६